amabhishi aseThekwini – AMANDLA!
Tag archives: amabhishi aseThekwini
Nakuba amabhishi aseThekwini engabukeki emahle ngokwejwayelekile muva nje njengoba bekunezikhukhula, indawo yasebhishi yinto abantu baseThekwini abangaziqhenya kakhulu ngayo. Yindawo enakekelwayo, esetshenziselwa izinto ezahlukene lapho kuhlanganela khona abantu bazo zonke izinhlanga neminyaka yobudala namasiko ukuzozivocavoca, bangcebeleke bajabule ndawonye, iyindawo yomphakathi esezingeni lomhlaba evuleleke kuwonkewonke. Kodwa bekungenjalo phambilini. Nakuba sonke siyazi imithetho yobandlululo eyayihlukanisa abantu bezinhlanga, abantu …
Continue reading “Izinguquko emabhishi aseThekwini”
Posted byAmandla Durban May 15, 2018 April 13, 2018 Posted inImportant People and SitesTags: amabhishi aseThekwiniLeave a comment on Izinguquko emabhishi aseThekwini